Political News | Politics of Nepal
मादी हत्या काण्डका आरोपीलाई आजीवन कारावासको फैसला
काठमाडौँ। संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ मा एकै परिवारका ६ जनाको हत्यामा संलग्नलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। ६ जनाको हत्या प्रकरणमा ५ जना पक्राउ परेका थिए। ती मध्ये मध्ये ४ जनालाई आजीवन कारावास फैसला भएको हो। हत्यामा संलग्न एक बालकलाई भने २५ वर्षको दुई तिहाइ कारावास फैसला भएको छ। विस्तृतमा
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार बस्दै
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकः निर्वाचन कानून मस्यौदाबारे छलफल
नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
पार्टीको पदाधिकारीसहित बाँकी कमिटीहरु टुंग्याउने जिम्मा प्रचण्डलाई
'अघिल्लो सरकारको पालामा भन्दा अहिले झण्डै दोब्बरले मूल्यवृद्धि भयाे'
अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझायो प्रतिवेदन
बालबालिकाका लागि थप २४ लाख मात्रा खोप आइपुग्यो
काठमाडौँ। बालबालिका लागि कोरोनाभाइरसविरुद्धको थप करिब २४ लाख मात्रा फाइजर खोप आइपुगेको छ। कोभ्याक्स सुविधामार्फत ५ देखि ११ वर्षसम्मका बच्चाहरुको लागि दिने २३ लाख ९९ हजार ३०० मात्रा पेडियाट्रिक डोज खोप आइतबार आइपुगेको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिए।
एकीकृत समाजवादीको झण्डा लेनिन पिकमा फहराइँदै
काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनाव चिह्न कलम लेनिन पिकमा फहराइने भएको छ। दोलखा जिरीका लालबहादुर जिरेलले किर्गिस्तानको प्रसिद्ध लेनिन पिकमा समाजवादीको कलम अंकित झन्डा फहराउन लागेका हुन्।
लोसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज आइतबार पनि बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा हिजो शनिबार दिउँसो पनि बस्न लागेको हो। बैठकमा संगठन निर्माण, गठबन्धन, कार्यकारिणी समिति विस्तार, भ्रातृ संगठन निर्माणलगायत एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ।
कृषि कर्ममा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन (फोटोफिचर)
काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन कृषि कर्ममा लागिपरेका छन्। अध्यक्ष लिङ्देन झापाको हल्दिबारी १ स्थित आफ्नै निवास पुगेर उनी कृषि कर्ममा लागेका हुन्। आइतबार उनले आफू धान रोपाईँमा संलग्न भएको फोटोहरु सामाजिक संजालमा राखेका छन्।
सभामुख सापकोटा आज स्वदेश फर्कंदै
काठमाडौँ। संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आज स्वदेश फर्कंदै छन्। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सम्पन्न ‘असंलग्न आन्दोलनको संसदीय सञ्जाल’ को सम्मेलनमा सहभागी भएर सभामुख सापकोटा नेतृत्वको नेपाली संसदीय प्रतिनिधिको टोली स्वदेश फर्कन लागेको हो।
विष्णु रिजालको प्रश्नः आफ्नै पार्टी व्यवस्थित गर्न नसक्नेहरुले देश कसरी व्यवस्थित बनाउन सक्छन्?
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले आफ्नै पार्टी व्यवस्थित गर्न नसक्ने नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले देश कसरी व्यवस्थित बनाउन सक्छन्? भनेर प्रश्न गरेका छन्।
माले पोलिटब्युरो सदस्य श्रेष्ठ सहित नेताहरु राप्रपा नेपालमा प्रवेश
काठमाडौँ। लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका कुमार श्रेष्ठ राप्रपा नेपाल प्रवेश गरेका छन्। नेकपा (माले) का पोलिटब्युरो सदस्य रहेका श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य वीरसिंह तामाङ लगायतलाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीमा स्वागत गरेका हुन्।
काठमाडौं ५ बाट चुनाव लड्ने रञ्जु दर्शनाको घोषणा
काठमाडौं । रञ्जु दर्शनाले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उठ्ने घोषणा गरेकी छन् । रञ्जु दर्शनाले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिने औपचारिक घोषणा गरेकी हुन् ।
माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कमिटी बैठक आज आइतबार बस्दैछ । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पटक–पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने तय भएपनि सर्दै आएको थियो । गत पुस १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेपनि हालसम्म अध्यक्षबाहेकका अन्य पदाधिकारी यन हुन सकेका छैनन् ।
एमालेको सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्नेगरि बोलाइएको हो । आइतबारको सचिवालय बैठकका लागि शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले एजेण्डा तय गरिसकेको छ ।